कोरियन भाषा परीक्षा अब पहिलेजस्तो नहुने – नेपाली सूर्य
कोरियन भाषा परीक्षा अब पहिलेजस्तो नहुने
January 29, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on कोरियन भाषा परीक्षा अब पहिलेजस्तो नहुने
शेयर अवश्य गरौ ।
वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया जान चाहनेले अब कम्प्युटरबाट परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत् दक्षिण कोरिया जानेले कागजी परीक्षा प्रणालीको साटो कम्प्युटरमा आधारित भाषा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस, कोरिया शाखाले सन् २०१९ मा ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया जान चाहनेका लागि यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो । ईपीएसमाफृत् नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको कोरियास्थित मानव संशाधन विकास विभाग (एचआरडी) को मागअनुसार उक्त प्रणालीमार्फत परीक्षा दिलाउने व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको ईपीएस शाखाले जनाएको छ ।
पुनः जान आवेदन खुलाउने तयारी
समाचार अनुसार, ईपीएस कोरिया शाखाले ईपीएसमार्फत कोरिया गई कम्तीमा तीन वर्षसम्म काम गरी वैधानिक भएर फर्किएका व्यक्तिका लागि कम्प्युटरको माध्यमबाट आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ । सो शाखाले आगामी वैशाखमा पुनः दक्षिण कोरिया जानका लागि आवेदन खोलने तयारी गरेको हो । गत वर्ष स्थगित भएको भाषा परीक्षा यो वर्षका लागि आगामी अप्रिल र अगस्टमा गरी दुईपटक आवेदन खुलाउने तयारी भएको सो शाखाले जनाएको छ ।
‘सिडिओ’कै सहमतिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष महिला माथी यस्तो गरेपछि
रहस्यमय ढंगले हराए जोन तामाङ ? परिवारको यस्तो छ आक्रोश र पीडा ?
फेरी अर्को दु:खद् खबर मलेसियामा एक नेपालीको मृत्यु ।
January 26, 2018 August 14, 2018 Nepali Surya
हजुरआमाको दाहसंस्कारका लागि जाँदा कालीगण्डकीमा बेपत्ता युवाको शव फेला
November 7, 2017 Nepali Surya
मतदातालार्इ पैसा बाँड्न बोकेको तीन लाखसहित एमाले कार्यकर्ता पक्राउ
December 6, 2017 Nepali Surya